Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwezinwele – SL Raw Virgin Hair LLC.
Wash & Condition (uma kudingeka)
Air Dry (ku-hanger)
Gwema ukusika ama-weft ngoba lokhu kungase kubangele ukuchitheka
Ngemva kokufaka Indlela yasebusuku
Sebenzisa ibhonethi ye-satin/isikhafu sikasilika ebusuku ngaphambi kokulala
Amakesi omcamelo we-Satin (akudingekile)
Izinwele ezisontekile, ukuluka, ukugoqa amaphini, ama-flexi rods (for curly/wavy) kuyizindlela ezinhle zokukhetha zesitayela sokuvikela.
Goqa izinwele ebusuku ukuze wenze izinwele zezinwele eziqondile ukuze ulondoloze izitayela ekuseni
Cizandiso Zezinwele zakho
- Siphakamisa ukuthi ube nomuntu ochwepheshile wokusika noma yikuphi ukuhlukana kokuphela, ikakhulukazi uma uhlela ukwenza isitayela sokushisa esiningi.
- Amathuluzi ashisayo angaba negalelo ekuhlukaniseni iziphetho, afinyeze impilo yezandiso zakho.
- Ishampoo nesimo - i-hydrating shampoo (Kera care noma i-Creme yemvelo) bi masonto onke ukuze kugcinwe ukuthamba ekulawuleni.
- Kuphakanyiswa ukuthi uvakashele umdwebi wakho wesitayela njalo ukuze izinwele zakho zilungiswe nge-shampoo, ikakhulukazi uma uthunga ekufakweni. Kubalulekile ukuthi izinwele zakho izandiso zihlanzwe kahle futhi zomiswe ngaphansi kwesomisi se-hood - ukugwema ukubumba.
- Izinwele izandiso akufanele ziphathwe ngokuqinile futhi kufanele zihlale zigezwa ngeshampoo ngendlela ebheke phansi.
- Gcina imikhiqizo yesitayela ibe okungenani ukuze ugweme ukusinda ezinweleni.
- Ingasebenzisa ukwelapha kwesimo sezulu esijulile ukuze igcine ukuthungwa okubushelelezi nokunethezeka kwe kwezinwele.
- Ukusebenzisa izivikeli zokushisa ezishisayo kusebenza kahle ngokuphila isikhathi eside, sebenzisa usayizi we-dime ngaphambi kokoma noku-ayina okuyisicaba noma ukugoqa.
- Zonke izinwele zethu ukwakheka kwazo ziqondana kalula. Qaphela ukuthi yonke imidwebo yethu ibuyela kuphethini yayo yokuqala yegagasi noma yokugoqa ngemva kweshampu ngayinye nesimo.
- Ukuze ugweme ukuhwaqabala vumela izinwele ukuze wome ngokwemvelo noma wome ngaphansi kwesomisi se-hood esishisayo. Sebenzisa ibhulashi lokugwedla/i-denman ukuze uhlukanise izinwele ezimanzi. Ukucwenga okungcono kakhulu kwenziwa uma kumanzi, ukukama izinwele ngenkathi ukoma kungabangela ukuklinywa nokuchitheka.
Uma uthenge iqoqo lezinwele ezigoqekile sicela uqaphele: imikhiqizo e-curl defining isebenza kangcono uma isetshenziswa ezinweleni ezimanzi (I-Paul Mitchell foam sculpt, i-Kinky Knot Namuhla, noma Ama-Curls) hlanganisa le mikhiqizo ne-dab yamafutha ukuze ugcine ukuthamba nokuphatha
- Ngezinwele ezifanele ukunakekela prakthiza izandiso zakho zezinwele kumele zikuthathe unyaka ongu-1 noma iminyaka emi-2